Iran: Waxaan soo ridnay diyaarad uu Mareykanka leeyahay - BBC News Somali
Iran: Waxaan soo ridnay diyaarad uu Mareykanka leeyahay
20 Juunyo 2019
Iran ayaa sheegtay iney soo ridday diyaarad aan duuliya lahayn oo Mareykanka laga leeyahay oo ku soo xadgudubtay hawadeeda.
Warbaahinta dawladda Iiraan oo soo xigtay ciidamada ilaalada kacaanka waxay baahiyeen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo Mareykanka laga leeyahay oo ku soo xadgudubtay hawda dalka Iiraan iney dhulka soo dhigeen.
Ciidamada cirka Iiraan waxay diyaaradda ay ku sheegeen iney wax basaaseysay waxay ku soo rideen gobolka Hormozgan oo ku yaalla Koonfurta dalkaasi.
Balse warbaahinta dowladda ma aysan baahin muuqaalka diyaaradda ay tehraan sheegtay iney soo ridday.
Dhacdadadni ayaa ku soo beegmenysa xilli ay cirka isku sii shareertay xiisadda u dhaxeysa Washington iyo Tehran.
Mareykanka wuxuu Marar badan uu Iran ku eedeeyey iney ka dambeyso weerarradi loo geystay maraakiibta saliidda qaada ee marayay marinka Hormuz.
Hase yeeshee, Iran ayaa eeddaasi ku gacan seyrtay iyada oo sheegtay iney weerarkaasi wax lug ah ku lahayn Mareykankana uu yahay waddan doonayo inuu gobolka dagaalka ka dhaco.
Iran: Diyaar baan u nahay in aanu wajahno cadawgeena
Iran : Netanyahu waa beenaale
Iran 'oo samaysanaysa maraakiib ku shaqaysa nukliyeer'
Xiriirka u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka oo marki horaba luga badan aan ku taagneyn wuxuu sii xumday marki uu Mareykanka ka baxay heshiiski Niyuukilarka isla-markaana cunaqabateenno dhaqaale uu saaray Iiran.
Sargaal sare oo ka tirsan xukumadda Tehran ayaa sheegay inuu dalkiisa walwal iyo cabsi toona uu ka qabin dagaal kasta oo gobolka ka qarxa.
Admiral Ali Shamkani oo ah xoghayaha golaha sare ee ammanka dalka Iiraan wuxuu sheegay iney jirin wax sababaya Mareykanka iyo Iran inuu dagal uu dhexmaro.
Xiisadahan ugu dambeeyay ee u dhaxeeya labadan dal ayaa imanaya kaddib markii ay Iiraan joojisay waajibaadkii ka saarnaa heshiiskii caalamiga ahaa ee nukliyeerka sidoo kalana ay ku gooddisay inay dib u bilaabi doonto barnaamijkii ay ku kobcinaysay uranium-keeda.
Heshiiskii 2015 ayaa waxaa loogaga gol-lahaa in Iiraan lagaga qaado cunaqabateynta taa badelkeedana ay soo afjarto barnaamijkeeda nukliyeerka, hasayeeshee Mareykanka ayaa sanadkii tegay isaga baxay heshiiskaasi iyadoo cunaqabateyn cusubna uu soo dalkaasi ku soo rogay.
Lahaanshaha sawirka MCSN Jason Waite / Navy Office of Information / A
Mareykanka ayaa waxa uu gacanka geeyay maraakiib iyo diyaarado dagaal waxa uuna amray in shaqaalaha aan sida degdega ah loogu bahnayn ee Ciraaq ku sugan ay halkaasi isaga soo baxaan, isagoo sheegay inay jiraan warar sirdoon oo sheegaya suuragalnimada halis ciidammada Mareykanka kaga timaado waddanka Iiraan.
Baarayaasha Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ay bilowgii bishan Iiraan ku eedeeyeen ama kooxaha ay baritaarto inay walxaha qarxa u adeegsanayaan inay ku waxyeeleeyaan maraakiibta shidaalka qaadda ee ka baxaysa Isu-tagga Imaaraatka Carabta. Tahraan ayaa iska fogaysay eedahaasi.
Rouhani : Wadahadal caadaadis nagulama saari karo
2 Juunyo 2019